Noel Gallagher sy Sam Smith dia ho tonga irery amin'ny Apple Music | Avy amin'ny mac aho
Avy amin'ny fotoana iray mba ho ampahany, rehefa toa nifarana tanteraka ireo exclusives taorian'ny adihevitra farany tamin'ny fifanarahana Apple Music niaraka tamin'ny mpihira iray, izay nanery ireo orinasan-tsoratra rehetra handao ity fomba ity, dia niverina tamin'ny entana i Apple niaraka tamin'ny fanolanana vaovao ho azy ireo. sehatra mozika mivantana, na dia amin'ity indray mitoraka ity aza dia tsy rakikira vaovao na zavatra hafa toa izany, fa miresaka kaonseritra roa izay ho tonga irery, angamba mandritra ny fotoana voafetra, amin'ny Apple Music alohan'ny hamoahana azy na azo alaina amin'ny fifaninanana.
Raha ny momba an'i Noel Gallagher, mpikambana taloha tao Oasis, fantatrao izao ny anaran'ity mpihira ity, dia ny fiovam-po nitranga tao amin'ny Lapan'i York any Londres ary tsy ny mozika sasany ihany no nilalaovan'ny mpihira tao amin'ilay rakipeo vaovao, fa mazava ho azy koa nanararaotra avoty ny sasany amin'ireo hira malaza indrindra ao amin'ny vondrona anglisy Oasis anisany izy tamin'ny taona 90, toy ny Aza mijery any aoriana ao amin'ny Anger na Champagne Supernova.
Ho azy, Sam Smith, dia manome konseritra tsy dia manokana loatra antsika, satria nandefa fandaharana tamin'ny fahitalavitra britanika izy volana vitsivitsy lasa izay, izay nankafizan'ny besinimaro ny fotoana mahafinaritra satria hitantsika amin'ny horonantsary fampiroboroboana izay navoakan'i Apple tao amin'ny fantsony an'ny Youtube. Sam Smith dia niaraka tamin'ny amboarampeo sy izy koa dia nihira hira avy amin'ny repertoire taloha ary koa ny sasany amin'ireo hira tao amin'ny rakipeo vaovao.
Amin'izao fotoana izao, raha Rovitra eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana ny tidalAraka ny efa nampahafantarinay anao, andro vitsivitsy lasa izay, ny mpanjaka mozika mivantana tsy azo iadian-kevitra dia Spotify miaraka amina mpanjifa maherin'ny 60 tapitrisa manerantany, arahin'ny Apple Music miaraka amin'ny antsasaky ny Apple Music fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Noel Gallagher sy Sam Smith tonga irery amin'ny Apple Music